Citoota sararaa himoota keessatti uumaman haquuf amala OfDhangi'aa fayyadami. Yeroo barruu madda biraa irraa garagalchitee galmee barruutti maxxansitu citootni sararaa hin barbaachisne uumamuu danda'a.
Amalli OfDhangi'uu kun barruu Akkaataa keewwata "Durtii"dhaan dhangi'ame irratti qofa hojjeta.
Meeshaalee - Dirqalee OfiinSirreessaa filadhu.
Caanala Dirqaalee irraa, Yoo dheerinni irra guddaa 50% ta'e keewwatoota sarara qeenxee wal qabsiisi filatamuu isaa mirkaneessi. Persenteejii xiqqaa dheerina sararaaf jijjiiruuf, dirqala tarree keessaa lama-cuqaasi, sana booda persenteejii haaraa galchi.
Barrruu citoota sararaa ati haquu barbaaddu qabatu filadhu.
Sanduuqa Haalataa Fayyadami kabala Dhangi'uu ,irra jiru keessaa “Durtii” filadhu.
Title is: Citoota Sararaa Haquu